Ciyaartii Masaska 🥇 Gali oo Ku raaxayso emulator.online
Ciyaarta masaska: sida loo ciyaaro talaabo talaabo? 🙂
In la ciyaaro backgammon khadka tooska ah ee bilaashka ah, si fudud raac tilmaamahan tallaabo-tallaabada ah:
1 Step . Fur furaha biraawsarkaaga aad door bido oo aad tagtid bogga ciyaarta Emulator.online
2 Step . Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad gujisaa Play oo waxaad bilaabi kartaa xulashada qaabeynta aad ugu jeceshahay. Waxaad awoodi doontaa inaad kala doorato qaabka caadiga ah iyo qaabka caqabadda (tacaburka) . 🙂
Tallaabada 4. Si aad ugu guuleysato ciyaarta waa inaad baabi'isaa isku xigxiga kubbadaha midabada leh adigoo tuuraya goobooyin. Markaad isku dhejiso saddex ama in ka badan oo isku midab ah, waa la tirtirayaa.
Waa maxay Ciyaarta Masku? 🐍
The Ciyaarta Sanka waa ciyaar loogu talagalay taleefannada gacanta, kombiyuutarrada fiidiyowga iyo kombuyuutarrada, ee Ujeeddada ugu weyni waa in lagu hago madaxa maska ​​shaashadda , Isku dayaya inuu cuno tufaaxa si aan kala sooc lahayn loogu qaybiyo wadadiisa. Si aanad u lumin, waa inaad ka fogaataa inaad garaacdo darbiyada iyo dabada abeesada.
Fudeednimadeedu waxay ka dhigeysaa ciyaar aad u gaar ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad isticmaasho fallaadhaha kumbuyuutarkaaga si aad abeesada ugu hagto guusha.
Taariikhda ciyaarta 🤓
Masku wuxuu u dhashay Isbaarooyinka bishii Oktoobar 1976 . Ciyaartii asalka ahayd waxaad kula macaamilaysay tartamo kale.
Ujeeddadu waxay ahayd in cadawgaaga ay isku dhacaan adiga ama naftooda intaad weli taagnayd. Kaliya waxaad u wareegi laheyd 90 darajo dhaqdhaqaaq kasta oo tan awgeed waxaad laheyd badhannada jihooyinka caadiga ah.
Nooca ugu caansan ee Ciyaarta Masaska, kala duwanaanta in la tixgeliyo oo cadowgeena yahay nafteenna, tan iyo innaga waxay ku dhici kartaa qayb kasta oo naga mid ah hadaan laga feejignaan.
Noocyada Isbaarooyinka iyo Masaska ayaa jiray kuwo badan. Atari wuxuu u abuuray laba nooc Atari 2600, Dominos iyo hareerayn . Dhinaceeda, nooc la yiraahdo Worm ayaa loo qorsheeyay Kombuyuutarrada Commodore iyo Apple II .
Iyo 1982 ciyaar cinwaankeedu ahaa Nibbler waa la siidaayay , mas jilaya goob lagu xasuusinayo labyrinth-Pac-Man (1980).
Kala duwanaansho, Nibble (1991) waxaa loo soo raray MS-DOS oo ah barnaamijka muunada QBasic. Iyo 1992, nooc la yiraahdo Tartanka Rattler waxaa lagu daray kii labaad ee madadaalada madadaalada ee Microsoft, aruurinta ciyaaro, qaar ka mid ah kuwaas oo lagu daray noocyada isdaba jooga ah ee Windows, sida Minesweeper ama FreeCell.
Dib-u-bilaabiddan, ma ahayn wax la yaab leh in Nokia sharad ku yaal xannibaadda / Masaska / Nibbler sida Default ciyaarta taleefannadooda Nokia. Dhaqdhaqaaqyadu waxay ahaayeen kuwo fudud oo la qabatimay, waxay ahayd madadaalo, iyo shuruudaha farsamo ee ay ahaayeen kuwo toos ah.
Noocyada Ciyaarta Masaska â˜ ï¸
Ciyaarta masaska waa nooc hore ciyaarta mobilada iyo kumbuyuutarka ee waqtigaas, markaa waa inaan lala yaabin inaan helno noocyo badan oo kulankaan ah . Sababta ay u sii wadayso nuqulayntu waa awooddeeda balwadda iyo fudeydkeeda markii la ciyaarayo, mana jiraan sababo kale oo sii socda oo ay ku jiraan suuqa.
Intaas oo dhan, ciyaartii la abuuray sanadihii 70-meeyadii ma ahan mid la ilaaway, waxaanan magacaabi doonnaa dhowr nooc oo ka mid ah Ciyaarta Masaska.
Masaska Nokia 1
Waa kan abeeso asal ah dib loogu abuuray Nokia S60. Kani waa nooca laga hadlayo markii aan sheegnay inaan ku ciyaareyno Ciyaarta Masaska moobilkeena.
Mas Maskii Asalka ahaa . Waa Maska ku habboon taleefannada iPhone. Noocani waxay doonayeen inay siiyaan eeg guridda in ay ku jirtay moobiilladii ugu horreeyay.
TiltSnake . Isticmaal xawaare dheereeya.
Masaska Wareega. Masaska caadiga ah ee loogu talagalay iPhone iyo iPod taabashada.
GeoSnake. Noocani wuxuu leeyahay hawl cusub oo ka duwan tan inta badan aan aragno, waana taas inaad leedahay howlo cusub adoo adeegsanaya khariidado juquraafiyeed oo kala duwan.
Maska Asalka. Waxay haysaa shaxanka moobiillada duugga ah sida ugu macquulsan.
Xitaa qalabka ugu caansan, oo leh muuqaallo iyo astaamo aan la barbar dhigi karin 90s, ma aysan awoodin inay iska caabiyaan iyagoo sii deynaya noocooda Ciyaarta Masaska . Dhammaantood waxay ku soo dareen wax cusub qaybtooda cusub, laakiin waxay ilaalinayaan nuxurka Ciyaarta Masaska. Kuwaas waxaa ka mid ah PSP, Play Station 3, WII, Nintendo DS iyo Xbox 360.
Masku aad ayaa loo hayaa fudud labada muuqaal ahaan iyo dhanka ciyaarta. Diiradu waxay saaran tahay abeeso ay ciyaartoydu geli karaan afar jiho: bidix, midig, kor iyo hoos .
Pixels (tufaax) muuqan shaashadda waana in lala qabtaa madaxa abeesada Iyadoo pixel kasta la cuno, kaliya ma ahan dhibcaha ciyaaryahanka, laakiin sidoo kale wadarta dhererka safka hal cutub.
Sidaa darteed, booska shaashadda ayaa sii yaraanaya marba marka ka dambaysa, taas oo iyana kordhinaysa heerka dhibaatada si isdaba-joog ah Cayaartu waxay dhammaanaysaa marka masku taabto cidhifka garoonka ciyaarta ama jidhkaaga.
Sida waxyaabo badan oo caan ah oo loo yaqaan 'Arcade classics', Maska waxaa lagu soo bandhigey kala duwanaansho fara badan oo ah ciyaar flash internet ah dhowr sano. Waxay kuxirantahay kala duwanaanta, caqabado dheeri ah ayaa la dhigaa Jidka ciyaartoyda si loo kordhiyo heerka dhibaatada.
Si aad awood ugu siiso tirada guud ee dhibcaha, dhibcood gunno ayaa lagu daray noocyada qaar.
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan ciyaarta waa in hawlgalkeedu yahay fudud, umana muuqato inay lagama maarmaan tahay inay noo sheegaan xeelad kasta oo looga hortago burburka. Dhamaadka maalinta waxaan haysannaa shaashadda oo dhan si aan dhammaad lahayn u wareejinno. Laakiin isla waxbaa mar walba nagu dhaca, waxaan gudaha ku qabsanaa gudaha abeesada jirka iyadoo aan loo helin waddo looga baxo halkaas.
Hagaag, ha filanin khiyaanooyinka nolosha aan dhammaadka lahayn ama sida loo sameeyo gabal ka mid ah Maskeennii oo u baabi'iyo qaab mucjiso ah, maya. Kuwani waa qaar talooyin fudud oo maskaxda lagu hayo haddii aan dooneyno inuu abeesadeenu koro oo aysan ku dhex xannibmin.
Marka hore, waa wax aad u fudud in la guuro shaashadda agteeda macno la'aan zigzags maxaa yeelay waxaan heysanaa meel badan, laakiin waxaa imaaneysa waqti aysan tani macquul aheyn cabirka Maskeena.
Halkan waxaan kugula talineynaa inaad markasta bilowdo abeesada ka rog dhanka gudaha , Sidan ayaad uga gaashaaman doontaa inaad ka tagto madaxa oo ku xaniban jirka dhexdiisa.
Tani waa himilada ugu weyn ee Maskeenna, waa inay cuntaa tufaax si ay u koraan. Waa hagaag, halkan waa khalad kale oo caadi ah, waana taas waa inaadan toos ugu tagin iyaga adigoon maanka ku hayn talada ugu horeysa. Ku hayso hoosta Maska marwalba xakameyntiisa, maadaama hadaanay ahayn, waxaad u badan tahay inaad kudhawaato inaad kudhacdo qayb kamid ah dabada.
Haddii loo baahdo, guntin tufaax ilaa aad ka hubto inaad maskaaga oo dhan gacanta ku hayso.
Ma ogeyd kulankaan Waxaan rajeyneynaa in maadaama aad heysato sheekada ciyaartan iyo sida loo ciyaaro, waxaad arki doontaa sida xiiso leh waxay noqon kartaa.
Waxaad ku heleysaa kulankaan halkaan waana sidoo kale bilaash ah, markaa ma jiraan wax cudurdaar ah oo lagu bilaabo ciyaarta oo saacado badan lagu qaato shaashadda.
Ciyaaraha moobiilku ha noolaadeen!